आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (५ कात्तिक २०७८ शुक्रबार, २२ अक्टोबर २०२१) « Nepali Digital Newspaper
५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ००:४१
श्रीशाके १९४३ नेपाल सम्वत् ११४१ शरद ऋतु वि.सं. २०७८ कार्तिक ५ गते शुक्रबार तद्अनुसार सन् २०२१ अक्टुबर २२ तारिख कार्तिक कृष्णपक्षको द्वित्तीया तिथि भरणी नक्षत्र सिद्ध योग तैतिल करण आनन्दादिमा मुद्गर योग चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः०८ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १७ः२६ मा हुनेछ ।
मेष – समय शुभ छ । आरोग्यता बढ्ला । शुभ कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछन् । मान महत्व बढ्नेछ । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुख बढ्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । आफन्तसुख बढ्नेछ । घरपरिवारको स्थिति अनुकूलै रहला । सुख–सुविधाको वस्तु बढ्नेछन् । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह थपिनेछ ।
वृष – धन–मानसित सम्बन्धित कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । आफन्तको साथ प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा रुचि बढ्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, तर योजना बनाएर काम गर्नु पर्ला । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन – रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नुका साथै इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । व्यस्तता बढ्ला । आय बढ्नेछ । लगानी उठ्नेछ । धन मान महत्व बढ्नेछन् ।
कर्कट – ग्रहगोचर शुभ र लाभदायक छ । कार्यमा सफलता मिल्नुसँगै विकासको काम पनि बन्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काममा रुचि बढ्नुसँगै यात्रामा पनि सफलता पाउनुहुनेछ ।
सिंह – नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । आशा उत्साह थपिनेछ । वर्चश्व बढ्नेछ । परिवारिक सुखशान्ति वृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । समस्या पर्दा कानुनको साथ प्राप्त हुनेछ । योजना र बजेट बनाइ कार्य गर्नु बेस रहला । उच्चाधिकारीहरुसँगको व्यवहारमा यश मिल्नेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ ।
कन्या – व्यस्त हुनुपर्ने समय छ । परिश्रम बढ्नुको साथै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ । प्रगतिको बाटो बलियो बन्ने छ । जीवनसाथीको सहयोग पाउनुहुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । मिठो भोजन पाउनुहुनेछ । यात्रामा ध्यान राख्नुपर्नेछ । लेखनप्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ ।
तुला – ऋण रोग र शत्रुप्रति ध्यान राख्नुपर्नेछ । साझेदारीको काम बन्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नुको साथै शत्रुलाई पनि जित्नुहुनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । आलस्य नगरी समयबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस् । मानमा कमी आउने छैन ।
वृश्चिक – ऋण, रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । प्रेमको क्षेत्रमा सफलता पाउनको लागि अत्यन्तै अनुकूल छ । आरोग्यता बढ्ला । इष्टमित्र सन्तान आदिद्वारा सहयोग मिल्नेछ । कला साहित्य संगीत गीत रसरागसित सम्बन्धित कार्यमा सफल रहनुहुनेछ । रचनात्मक र कलात्मक कार्यमा सफलताको साथै साथीभाइबीच आमोदप्रमोद हुनेछ ।
धनु – देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । आम्दानी बढ्नेछ । यात्रा हुनेछ । भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु उचित हुनेछैन । आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु बेस रहला । विवाद आदिका समाधान प्राप्त हुनेछ । ठूलो रकमको लगानीको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कागजपत्र माथि हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । आयस्रोत बढ्नाले आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ ।
मकर – विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्ला । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । नयाँ-नयाँ काम बन्ला । मान महत्व वर्चस्व पर्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नुको साथै सुख शान्ति बढ्नेछ । अन्नधन बढ्नेछ ।
कुम्भ – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ने छ । आनन्द बढ्नेछ । सुख शान्तिमा वृद्धि होला । प्रेमपात्रको साथ पाइनेछ । भोजभतेरमा भाग लिनुहुनेछ । आर्थिक वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । आर्थिक उत्थानको बाटो देखापर्ला । उच्चाधिकारीको साथ मिल्नेछ । गौरव बढ्नेछ ।
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१३ मंसिर २०७८ सोमबार, २९ नोभेम्बर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ हेमन्त ऋतु वि.सं. २०७८ मार्गशीर्ष १३
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१२ मंसिर २०७८ आइतबार, २८ नोभेम्बर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ राक्षस नामक सम्वत्सर हेमन्त ऋतु वि.सं.
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (११ मंसिर २०७८ शनिबार, २७ नोभेम्बर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ हेमन्त ऋतु वि.सं. २०७८ मार्गशीर्ष ११
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१० मंसिर २०७८ शुक्रबार, २६ नोभेम्बर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ हेमन्त ऋतु वि.सं. २०७८ मार्गशीर्ष १०